KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Faallo - Shirqoolka Maldahan ee Sharif Axmad
Ayuub A. Aden (Keydmedia) - Yaa horboodaya Shirka Daagaal-curinta Cadaado laga bilaabay…? Dagaal-ooggidda maxaa Dabasocda…? Yaa Dabada Ka riixaya…? Yaa loogu danaynayaa…? Yaa Laysku dirayaa…? Yaa loo danaynayaa…? Yaa maalgelinta bixinaya…? Ya ka faa’iidaysanaya…? Yaa daawade ka ah…?
Addunkaaga iyo Aakhiradaada haku lumin eed iyo dakano aad ka gasho ehelkaaga, adigoo ku raalligelinaysid kuwo leh oo leh dano gaar ah. Ogow “Shisheeye sheelo duxa ma leh,” waa maah maah facweyn oo lagu waano qaato. Dagaal Sokeeye
Maqaawiirta Maxaakiimta qaran oo Jabuugti geeska ku riixday waxaa kamid ahaa xulka Siyaasadda Qaranka Madaxda hoodada u leh oo hoggaamin kara dawlad nuxur leh ee Soomaaliyeed, waxaana kamid ah: Yuusuf Dheeg, Jaamac Cali Jaamac, Xasharo, Jaamac C. Qaalib, Shariif Saalax, Sheikh Cumar Iimaan, Sakariya, Xuseen M.Faarax Caydiid, Aamina Axmad Warsame iyo kuwo badan oo ay isku mowqif ahaayeen.
Waxaase Meles Zenawi ku adkaystey inuu hago dalladda 2-da TFG oo ay wada hoggaaminayaan Madaxweyne Shariif Axmad iyo Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmad. Siddaas oo kale ayaa Waalad Cabdalle oo ahaa wakiila Xoghaya QM Jabuuti uga gaday dhagartii ay isla maleegeen Shariif Axmad iyo madaxdii Jabuuti, wuuna oggolaaday.
Shariif Axmad iyo madaxda Jabuuti hala wariyo inta ku dhimatay, inta ku dhaawacanta, inta ku barakacday, hantida ku burburtay iyo basanbaaska ku dhacay bulsho Soomaaliyeey oo kor u dhaaftay 2 Malyan iyo bar, qaarkoodna buulal bac ah baa uga dhisan duleedyada Muqdisho. Jabuuti iyo Xambaarashada Kooxdii Manifesto
Waxaa xusuus leh inaan Maxamad Siyaad oo Madax ka ah dawlad gaamurtay inaan Manifesto hadal iyo gorgortan dawladnimo wax looga qaadi Karin haddaan qori caaraddiis xukuna looga qabsan. Manifesto waxay u guntatay inay afduubto doorkii ururrada hubaysan qabteen.
Halkaan ka Aqriso Qeybta Labaad (Guji Meshaan)
Oslo (KON) - Shir ka dhacay xarunta Xisbiga Shaqaalaha Norway ayaa waxaa ka soo qayb galay Siyaasiin Soomaali ah oo ka tirsan xisbiga Shaqaalaha ee haya talada wadanka Norway.
Madaxweyne Qaybdiid oo la dardaarmay dhalinyarada Galmudug
Madaxweyne Xasan “Wada shaqaynta Xukuumada iyo Baarlamaanka ayaa guul lagu gaari karaa”
R/wasaaraha oo ka hadlay mooshinkii lala laabtay
50-Sano guuradii aas-aaska ururka Midowga Afrika oo Muqdisho laga xusay
Axmed Sandheere: “Axmed Madoobe Taangi Sawaaxili ayuu saaranyahay”
Warbixin: Beeraha Deg. Afgooye // Daawo
Ciidamada Kenya oo Howlgalo ka wada Gaarisa // Sarkaal lagu dilay Magaalada
Odoyaasha Dhaqanka Gobolka Hiiraan oo doortay Guddoomiye
Idiris X.Faarax Oo Laga Waraystay Fadeexadii Cunto Karinta Faroole Iyo Wiilkiisa